UpSnap waxay bixisaa shabakad xayaysiis moobil ah oo bixisa in kabadan hal bilyan oo muuqaal bishii. Iyo iskaashiga ay la leeyihiin qaar ka mid ah bogagga ugu waawayn, waxay awoodaan inay ku soo bandhigaan xayeysiis shabakadaha saddexaad oo ah qiime ka badan bilyan 100 bilyan. UpSnap waxay awood kuu siineysaa inaad beegsato macaamiisha ku dhow meheraddaada. Mar alla markii ololahaagu si toos ah u socdo, UpSnap wuxuu u soo bandhigi doonaa xayeysiiskaaga moobiilka macaamiisha meel shan mayl u jirta. Bartilmaameedsigu wuxuu ku fidayaa dibedda oo ku saleysan